यी हुन् केएफसीका ५ सिक्रेट, ११ मसला गोप्य बाकसमा बन्द
काठमाण्डौ । तपार्इंलाई यो सुनेर पत्यार नलाग्न सक्छ कि, केएफसिको ११ मसालाको रेसिपी एक सुरक्षित बाकसमा बन्द गरेर राखिएको छ । केएफसी अर्थात केन्टुकी फ्राइड चिकेनसँग जोडिएका कयौं यस्ता कुराहरु छन्, जसको बारेमा सायद तपाईलाई जानकारी नहुन सक्छ । बिक्रीको हिसाबले विश्वकै दोश्रो सबैभन्दा ठूलो फास्ट फूड फ्रेञ्चाइजी केएफसीको बारेमा केही पाँच...
५० रुपैयाँ लिएर घरबाट निस्किएका यी व्यक्ति ५ वर्षमै डलर अर्बपति !
काठमाण्डौ । केरलाको पालघाटमा किसान परिवारमा जन्मिएका यी व्यक्ति पिताको निधनपछि जब घरबाट निस्किए, तब उनको साथमा मात्र ५० रुपैयाँ थियो । आर्थिक समस्याका कारण उनले बीचमा पढाई समेत छाड्नु परेको थियो । आज लगभग चार दशकपछि तिनै व्यक्ति १६ हजार करोड रुपैयाँ अर्थात १५० करोड डलरको धनी बन्न सफल भएका छन् । यस्ता संघर्षशील व्यक्ति हुन् भारतमा ‘शोभा...
जोन्सन पाउडर प्रयोगले फेरि अर्की महिलालाई क्यान्सर, ५७६ करोड क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
एजेन्सीको सहयोगमा काठमाण्डौ । विश्वमै सर्वाधिक प्रयोग हुने गरेको जोन्सन एण्ड जोन्सन कम्पनीको पाउडरका कारण अमेरिकामा अर्की महिलालाई समेत क्यान्सर भएको अदालतले पुष्टि गरेको छ । यही कुराको पुष्ट्याई भएपछि ती महिलाले हालेको मुद्धाउपर सुनुवाई गर्दै अदालतले ५७६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दिन कम्पनीको नाममा आदेश जारी गरेको छ...
रामदेवको भनिएको पतञ्जलीका असली मालिक नेपाली !
नयाँदिल्ली । पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीलाई रातारात लोकप्रिय बनाउन भलै बाबा रामदेवको नाम अगाडि आउँछ, तर तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ, बाबा रामदेवले पतञ्जली चलाएका होइनन् वा उनको लगानीले यो कम्पनी आजको उच्च स्तरमा आएको होइन । देशी र विदेशी मल्टिनेशन कम्पनीलाई टक्कर दिने हैसियत बनाएको पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीको सबैभन्दा ठूला मालिक नेपाली...
मौरीको टोकाईले चम्कायो भाग्य, ११ वर्षको उमेरमै करोडपति, ओबामासँग डिनर बैठक
काठमाण्डौ । कहिलेकाही सानो–सानो कुराले समेत ठूलै परिवर्तन गरिदिन्छ । सानो–सानो प्रयास जोडिइँदै जाँदा यति ठूलो बनिदिन्छ कि, जुन कुरा ठूला र दिमागवालाले समेत गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । अमेरिकाको एक कम्पनी बीस्वीट लिमोनेड(हाल मी एण्ड द लेमोनेड) यसको एक शानदार उदाहरण हो । जहाँ एक सानो बच्चाले मौरीको टोकाईबाट पाठ सिक्दै थालेको प्रयास अहिले...
साउदीको बिन लादेन समूहले ५० हजार कर्मचारी निकाल्यो, हजारौं नेपाली पनि
काठमाण्डौ । साउदी अरबको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमध्येको एक बिन लादेन समूहले ५० हजार कामदारलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेको छ । बर्खास्त हुनेमध्ये हजारौं नेपाली कामदार समेत रहेका छन् । कच्चा तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले साउदी अरबले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ र यसलाई कम गर्न तथा सम्हाल्न साउदी सरकारले विभिन्न कदम चालिरहेको...
एकघण्टामै ४१ हजार करोड कमाउने यी भाग्यमानी युवा
काठमाण्डौ । फेसबुकको बिषयमा ज्ञान नहुने यो संसारमा निकै कम व्यक्ति होलान् । तर फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्ग १२ वर्षअघि अमेरिकाको एक सामान्य होस्टेलका सामान्य छात्र मात्र थिए भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ । सायद स्वयम् जुकरबर्गले समेत सोचेका थिएनन् कि उनले फेसबुकमार्फत सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा नयाँ आयाम ल्याउनेछन् र विश्वमै...
१३ वर्षमा पहिलोपटक एप्पललाई लाग्यो झट्का !
काठमाण्डौ । प्रविधिको दुनियाँको दिग्गज कम्पनी एप्पललाई पछिल्लो १३ वर्षको अवधिमा पहिलोपटक झट्का लागेको छ । मंगलबार सार्वजनिक एक तथ्याङ्कका अनुसार जारी अंग्रेजी वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा कम्पनीको आम्दानीमा १३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । कम्पनीले पछिल्लो समय चीनमा गरेको कमजोर प्रदर्शन र आफ्नो उत्पादनलाई लिएर घाटा हुनै...
विश्वका नोटबीच पनि ‘ब्यूटि कम्पिटिसन’ ! न्यूजिल्याण्डको ५ डलर ‘वर्ष नोट’
काठमाण्डौ । सुन्दर युवतीहरुलाई र्याम्पमा उतारेर विश्वका कैयन देशमा सुन्दरी प्रतियोगिता भएको सुनिएकै हो । तर विश्वका धेरै देशहरुको सहभागितामा एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थाले केही वर्षअघिदेखि सुन्दर तथा आकर्षक नोटको समेत ‘ब्यूटि कम्पिटिसन’ गर्दै आएको छ । ‘इन्टरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी’ नामको संस्थाले नोटहरुबीच ब्यूटि...
मल्टिनेशन कम्पनीलाई टक्कर दिने रामदेवको योजना, भारतभरि दूधको 'एटीएम' खोलिने
काठमाण्डौ । बाबा रामदेवले सुरु गरेको पतञ्जली आयुर्वेद लिमीटेडका उत्पादनहरु भारतमा मात्र होइन विश्वका धेरै मुुलुकमा लोकप्रिय बन्दै गएका छन् । नेपालमा समेत पछिल्लो समय शहरैपिच्छे पतञ्जलीका उत्पादन मात्र पाइने पसल खुल्न थालिसकेका छन् । आफ्नो उत्पादनको यही लोकप्रियतालाई मध्यनजर गरी बाबा रामदेवले मल्टिनेशन कम्पनीहरुलाई समेत चुनौति...
भारतमा चिनिया मोवाइल प्रतिबन्ध !
काठमाण्डौ । बेला–बेला भइरहेके कुटनीतिक टक्करकै बीच भारत सरकारले केही चिनिया कम्पनीले उत्पादन गरेका मोवाइलको आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यसका साथै इलक्ट्रोनिक, स्टील, दूधजन्य केही आइटमहरुको आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जे जे आइटममा प्रतिबन्ध गरिएको छ, ती उत्पादनहरु अब कोही कसैले पनि भारतमा आयात गर्नु गैरकानूनी...
भूतप्रेतले मालामाल विश्वका ५ होटल, जहाँ कोठा बुकिङ गर्न कयौं दिन कुर्नुपर्छ
काठमाण्डौ । भूतप्रेतको हल्लाकै कारण दुनियाँका कतिपय व्यवसाय ठप्प छन् । भूतप्रेत देखिएका, महसुुस भएको, तर्साएको जस्तो हल्ला फैलँदा विश्वका कतिपय महल, बंगला तथा होटेलहरु समेत सुनसान भएका छन् । तिनीहरुको व्यापार, त्यहाँ मानवीय चहलपहल शून्यप्राय हुने गरेको छ । तर विश्वमा केही यस्ता होटल पनि छन्, जहाँ भूतप्रेतका कारण मानिसमा हुने डरले...
झूठ बोलेर ६ लाख गाडी बिक्री, मित्सुबिसीले माग्यो माफी
काठमाण्डौ । जापानको निकै ठूलो मोटरकार कम्पनी मित्सुबिसीले इन्धन खर्चको बारेमा गलत दाबा गरेर भ्रम फैलाई ग्राहकलाई ठगेको कुरा स्वीकार गरेको छ । यस्तो झूठो दाबी गरेर यो कम्पनीले जापानमा ६ लाखभन्दा धेरै गाडीहरु बिक्री गरेको थियो । टायरमा हावाको दवाब बारे गलत जानकारी दिएर आफ्ना कर्मचारीहरुले गाडीको माइलेजको बिषयमा भ्रमपूर्ण प्रचार...
२ मिटर माथिबाट ढुंगा-इँटामा खसाल्दा समेत नफूट्ने स्मार्टफोन !
काठमाण्डौ । ब्रिटेनको एक कम्पनीले निर्माण क्षेत्रका मजदूरहरुका लागि निकै उपयोगी हुने हालसम्मकै मजबुत स्मार्टफोन निर्माण गरेको छ । यो स्मार्टफोन यति धेरै बलियो छ कि २ मिटरको उचाईबाट इँटा, ढुंगा वा सिमेन्टेड भूईमा खसे पनि केही हुँदैन । यति मात्र कहाँ हो र ? यो फोनमा निकै विशेष गुणहरु समेत छन् । जस्तो माइनस २० डिग्रीको जमाइदिने जाडो वा ६०...
अर्काको सफ्टवेयर चोर्ने टाटा कम्पनीलाई अमेरिकामा झट्का, १० हजार करोड जरीवानाको फैसला
काठमाण्डौ । अमेरिकी कम्पनीको सफ्टवेयर चोरेको आरोप पुष्टि गर्दै एक अमेरिकी अदालतले अटोमोवाइलको क्षेत्रमा विश्वमै चर्चित टाटा कम्पनीलाई करिब १० हजार करोड नेपाली रुपैयाँ जरीवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । यो फैसलालाई संचारमाध्यहरुले टाटालाई अमेरिकामा ठूलै झट्का लागेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । अमेरिकाको ग्राण्ड ज्यूरीले टाटा...